Oumou Keita, Knowledge SUCCESS मा लेखक
वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी, PRB पश्चिम र मध्य अफ्रिका
डकारको CESAG बाट स्वास्थ्य अर्थशास्त्रमा MBA र Bordeaux IV विश्वविद्यालयबाट सार्वजनिक स्वास्थ्यमा स्नातकोत्तरको साथ, उनी सबै सन्दर्भमा गुणस्तरीय यौन र प्रजनन स्वास्थ्य सेवाहरूमा पहुँच सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध छिन्. उनीसँग प्रजनन स्वास्थ्य समस्याहरूमा रणनीतिक कार्यक्रमहरूको विकास र मूल्याङ्कनमा विशेष विशेषज्ञता छ (मातृ र नवजात स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, किशोर प्रजनन स्वास्थ्य). अन्तमा, उनले सार्वजनिक नीति निर्माताहरू र अन्य विकास अभिनेताहरूसँग वकालत र सञ्चारलाई समर्थन गर्न कार्यक्रम लागत र लगानी फाइलहरू मार्फत डेटा उत्पादनमा काम गर्छिन्।. ओउमो हाल मोन्ट्रियल विश्वविद्यालयको स्कूल अफ पब्लिक हेल्थमा पीएचडी विद्यार्थी हुनुहुन्छ. उनको अनुसन्धानले सेनेगलमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा आत्म-हेरचाहको परिचयको शासन र दिगो वित्तपोषणको सन्दर्भमा चुनौतीहरू र अवसरहरूमा केन्द्रित छ।.
च्याट_बबल0 टिप्पणी गर्नुहोस् दृश्यता1143 दृश्यहरू
च्याट_बबल0 टिप्पणी गर्नुहोस् दृश्यता9873 दृश्यहरू